Vakodrazana : Navelan’i Dadabagy ho kamboty ny tarika Ny Voninavoko -
AccueilVaovao SamihafaVakodrazana : Navelan’i Dadabagy ho kamboty ny tarika Ny Voninavoko
Vakodrazana : Navelan’i Dadabagy ho kamboty ny tarika Ny Voninavoko
01/06/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Lavo ny andrarezina. Na dia nanao izay ho afany aza ny fianakaviana sy ny mpitsabo, nodimandry omaly maraina tamin’ny 5 ora tetsy amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) Rakotomavo Gabriel. Navelan’i Dadagaby ho kamboty ny tarika Ny Voninavoko, izay tarika naoriny tamin’ny taona 1965, nivoy ny vakodrazana ary nitondra sy nampahafantatra izany kolontsaina malagasy izany tamin’ny firenena maro manerana izao tontolo izao. 83 taona izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Fianjerana indroa nisesy tao an-tranony no nitarika ny tsy fahasalamana. Fianjerana vokatry ny aretin’ny tosidra izay efa nahazo azy hatramin’ny taona 2002.
Taorian’ny nananganany ny tarika Ny Voninavoko, dia maro ireo firenena efa noteteziny nitondrana ny vakodrazana malagasy toa ny tany La Réunion, Frantsa, Inde, Soisa, Grande-Bretagne, Alemana, Etazonia… Ankoatra ny tany ivelany anefa, dia anisan’ireo nandalina ny kolontsaina malagasy ihany koa i Dadagaby, indrindra ny tontolon’ny vakodrazana. Anisan’ny mahalala tsara ireo dihin-drazana malagasy izy, ary hainy tsara ny mitantara ny Bahoejy, ny basesa, ny Hôsiky, ny salegy, ny Tsapiky… Tsy nahagaga noho izany raha mpampianatra sy mpamorona dihy ihany koa izy. Anisan’ny nahafantarana an’i Dadagaby ny famoronana ireo hira sy dihy izay tsy tongatonga ho azy fa miainga amin’ny zava-misy sy ny fijereny ny tontolo manodidina azy.
Fantatra tamin’ny fahaizana mamoron-kira ihany koa izy ary anisan’ny manaitra ny fahaizany mitantara ao anatin’ny tononkira. Anisan’ireo nahalalan’ny maro azy ireo hira malaza toa ny « Voninavoko », « Zaza mitomany », « Raozy mavokely », « Mananjary » ; « Indray tsikitsiky »…. Maro rahateo ireo mpanakanto manana ny lazany toa an-dry Erick Manana, Hanta… no nindrana ny hirany sy niangaly izany tamin’ny endrika hafa.
Malagasy voalohany nambaran’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny vakoka sy ny kolontsaina ho « Olona harena mbola velona », ary nisy ny seho natokana ho azy ny 29 jona 2007.
Mbola tsy fantatra ny fandaharam-potoana hatreto, fa araka ny fanazavan’ny zanany, Christian Tsilavina, dia ny alatsinainy izao no hanatanterahana ny fandevenana azy eny Alatsinainy ambazaha eny Antsahadinta. Namela mananon-tena sy kamboty 11 mianadahy izy. Izahay eto amin’ny gazety dia mirary fiononana ho an’ny tarika Ny Voninavoko sy ny fianakaviana.
Taorian’ny fandraisan’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, ny masoivohon’i Canada, Sandra Mc Cardell, dia noraisin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Henry Rabary-Njaka, indray ny tenany omaly, tetsy amin’ny birao foiben’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE) etsy Anosy. Tamin’izany indrindra no ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : « Ilaina amin’ny fampandrosoana ny herinaratra »
Filoha Hery Rajaonarimampianina : “Andraikitry ny tsirairay ny fandriampahalemana”